Sida loogu daawado YouTube-ka sawir-sawir ahaan iPhone iyo iPad | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loogu daawado YouTube-ka sawir-sawir ee iPhone iyo iPad
Sida loogu daawado YouTube-ka sawir-sawir ee iPhone iyo iPad
Waxaa laga joogaa ku dhawaad ​​shan sano tan iyo markii Apple ay keentay sawir-ku-gudbinta iPad-ka, haddana sifada wali ma taageerayo abka rasmiga ah ee YouTube. Laakiin waxaa jira siyaabo kale oo aad ugu raaxaysato PiP fiidiyowyada YouTube.
Soo hel laba ka mid ah kuwa ugu wanaagsan habkan loo hago.
Asal ahaan waanu ka quusanay weydiinta taageerada PiP ee gudaha abka YouTube-ka wakhtigan. Uma eka inay taasi weligeed dhici doonto, mana hayno wax fikrad ah sababta Google uga soo horjeedo (waxaa laga heli karaa Android).
Laakin dhib malaha. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu daawado fiidiyowyada YouTube qaabka PiP iyadoo la raacayo ama la'aanteed abka rasmiga ah ee YouTube.
Isticmaal Safari si aad u daawato fiidiyowyada YouTube gudaha PiP
Habka ugu fudud ayaa ah in laga fogaado gabi ahaanba abka YouTube oo aad isticmaasho Safari beddelkeeda:
Fur fur Safari app.
Soo hel muuqaal aad rabto inaad daawato.
Daar qaabka shaashada buuxda
Tillaabada afraad aad bay muhiim u tahay: Haddii aanad awood u siin qaabka shaashadda oo dhan, waxaad ogaan doontaa in PiP aanu shaqaynayn marka aad xidho Safari. Fiidiyowgaaga YouTube si fudud ayuu u joojin doonaa ciyaarta, waxaadna u baahan doontaa inaad dib ugu laabato si aad dib u bilowdo.
Ku isticmaal PiP-it abka YouTube-ka
Haddii aad runtii doorbidayso inaad isticmaasho abka YouTube, waxaad ku dari kartaa abka sida PiP-it! si sawir-ku-sawir-ku-sawirku suurto-geliyo. PiP-waa! waa u xor in la soo dejiyo oo aad isku daydo saddex maalmood, ka dib $1.99 si aad u furto wanaag.
Kadib rakibida PiP-it! Qalabkaaga, raac talaabooyinkan:
Fur fur YouTube app oo bilow muuqaal.
Taabo Share badhanka, ka dib taabo More.
Dooro Sawir-gudaha-Sawirka leh PiP-it!
PiP-waa! waxay ku keentaa sawir-muqaal abka rasmiga ah ee YouTube.
Sawirka: Killian Bell/Cult of Mac
Marka fiidyowgaaga uu ku ciyaarayo qaabka PiP, waxaad u wareejin kartaa daaqadda gees kasta oo shaashadda ah, oo laba jeer taabo si aad u cabbirto (iPhone). Waxa kale oo aad u mari kartaa cidhifka shaashadda si aad si ku meel gaar ah u qariso.
Ogsoonow in sawirka-ku-guduhu aanu ka shaqayn doonin iPhone la'aantii iOS 14.
Ku raaxayso YouTube 4K
Hal horumar oo wanaagsan oo lagu sameeyay YouTube gudaha iOS 14 iyo iPadOS 14 waa awooda lagu ciyaaro fiidiyowyada 4K, kaas oo u muuqda mid aad u fiican bandhigyada Retina ee heerka sare ah. Tani waa sababta oo ah Apple hadda waxay taageertaa codec VP9 ee Google.
Nasiib darrose, waxaa jira Apple wax yar oo ku saabsan taageerada PiP ee abka YouTube-ka ee rasmiga ah.
5 Tilmaamaha Xisaabinta WooCommerce ee Muhiimka ah
Ganacsadaha ayaa ku iibiya badeecada ugu tartanka badan Amazon, wuuna horumaraa